Archive du 20/02/2012
Minisitra nivatravatra tany Antsohihy
Tohina ny Tsimihety
Ahiana ho lasa lavitra ny tsindry aloka eo anivon�ny samy mpikambana ao amin�ny governemanta Beriziky miseho lany tato ho ato.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Feno CT mpanao tsidi-pahitra
Fotoam-panokafana fivoriana, ara-potoana na tsy ara-potoana, no mba tazana eny Tsimbazaza ireto andiana CT ireto, dia amin�ny fotoana fandraisam-bola.
Faritra Atsinanana Miandry an-dRavalo ny vahoaka
Faritra anisan�ny voa mafy tamin�ny fandalovan�ny rivodoza Giovanna ny Faritra Atsinanana.
Nitondran�ny CST fanitsiana
Nankatoavina ny sabotsy 18 febroary 2012 teny anivon�ny Filankevitra Ambonin�ny Tetezamita saingy nasiam-panitsiana ny volavolan-dal�na fehizoro laharana 003/2012 tamin�ny 25 janoary 2012 mahakasika ny lal�m-pifidianana.
Nisongadina ny resaka fampihavanana
Mafana sy mitohy hatrany ny hetsika ao amin�ny kianjan�ny Magro Avaratsena Antsirabe ny sabotsy 18 febroary lasa teo.
Mila drafitra fampiharana mazava ny tondrozotra !
Ny tsy fisian�ny drafitra mazava hampiharana azy no mahasarotra ny fanatanterahana ny tondrozotra, araka ny fahitan�i Manantsoa Victor azy.
�Tsy misy fanjakana intsony eto�
Efa tsy fisiana fanjakana intsony ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena.
Hifidy izay ho solontenany ny mpitsara rahampitso
Rahampitso talata 21 febroary no hotontosaina ny fifidianana izay ho solontenan�ny mpitsara ao amin�ny CENI.
Parlemanta Tsy maintsy hirosoana ny amnistia
Rehefa tsy hanao ny governemanta dia aleo hataon�ny Kongresy sy ny Filankevitra ambonin�ny tetezamita, hoy ny CT Mamitiana Ravelonanosy manoloana ny firaikiraiken�ny fahefana mpanatanteraka amin�ny famolavolana ny volavolan-dal�na momba ny famotsoran-keloka faobe.
Lany andro miana-draharaha
Nanamafy ny praiminisitra Omer Beriziky ny sabotsy lasa teo fa nisy tokoa ny fanitsahana ny andraikitry ny minisitry ny atitany, nataon�ny minisitry ny fanapariaham-pahefana tamin�ny fanesorana ireo Ben�ny tan�na efatra tany Sofia ka nametrahana PDS.
Miomana fatratra �
Tao anatin�ny lanonana fifampiaharahabana nahatratra ny taona 2012 teny Androhibe ny sabotsy teo no nanambaran�ny filohan�ny vehivavy TIM Boriborintany faha-V, Rtoa Rasendramiadana Clarisse, fa iray ihany ny Tiako i Madagasikara.
Filohan�ny ankolafy Ravalomanana Toliara
Resaka dramotse avao �ty atao ame Tojo Ravalomanana
Latsaka an-katerena lalina ny firenena
Tamin�ny fivoriana izay nataony ny zoma 27 janoary 2012 no nanambaran�ny �Collectif des Professeurs et Professeurs Titulaires des Universit�s de Madagascar� fa latsaka an-katerena lalina ny firenena.
Maika ny fiverenan�i Dada
Tena maika ny fiverenan�ny filoha Marc Ravalomanana an-tanindrazana ho an�ny VAMI na ny Vahoaka Miray hahafahana manavotra haingana ny firenena.
Asio �pont Bailey� fa aza jerem-potsiny !
Manomboka mampiaka-peo ny mponina eny Ambohimangakely eny amin�ny fitarazohan�ny asa fanarenana ny tetezana izay nihotsaka vokatry ny ranobe nentin�ny rivodoza Giovanna farany teo.
Familian-dalana noho ny lalana tapaka
Tsy misy fandraisana andraikitra amin�ny fitohanan�ny fifamoivoizana
Toerana efa tsy laitra fa anisan�ny ahitana fitohanan�ny fifamoivoizana izay tsy izy ary saika mandava-taona mihitsy (tahaka ireo marobe eto an-drenivohitra) ny miala eny Mandroseza mandalo an�Ambanidia mandra-pahatonga aty amin�ny �route cirlulaire� Ankorahotra iny.
Zanaka mpitondra FAT
Misy amin�ireo zanaka mpanankarena na koa mpitondra ambony no mihetraketraka.
Dimy volana taorian�ny nanasoniavana azy dia manomboka mitombo isa ireo olona, vondron�olona, fikambanana ary antoko politika milaza fa tsy vahaolana amin�ny famahana ny krizy ny tondrozotra, ka ilaina indray ny hanatanterahana fifampidinihana iray goavana eo amin�ny samy Malagasy.